PineNote: Vhura Chinyorwa eReader nePen Rutsigiro | Linux Vakapindwa muropa
PINE Microsystems yakazivisa chigadzirwa chitsva chinonzi PineNote. Ihwendefa rine inki yemagetsi (e-Ink) inoitirwa kushanda seE-Reader yeemaBooks ako kana emadhijitari. Ichi chishandiso chinoshanda neiyo chete SoC iyo yako Quartz64 SBC yakavakirwa pairi.
Iyo Hong Kong-based inogadzira inowedzera kupfuura yayo Pine64, ine PinePhone uye PineTIme, uye ikozvino iine izvi zvimwe zvishandiso zvinoenderana ARM uye Linux machipisi. Panyaya yePineNote e-bhuku muverengi, zvinoda kuita madhora mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe, uye zvinotarisirwa kuti muEurope ichatengesa nezve € 399 (munoziva, mania ayo vagadziri ekukuvadza maEuropean nekushandura $ = €) .
Kune rimwe divi, iwo makuru mabrandi erudzi urwu rwechigadzirwa, senge Amazon's Kindel, anobatsirwawo ne bhuku rekutengesa muzvitoro zvako kuti uwane purofiti yakawanda. Izvo zvinovapa iwo mukana wekudzora mitengo yea e-Readers uye nekuvaita kuti vakwezve kune vashandisi, uye izvi hazvisizvo neiyi PineNote ...
Zvisinei nezve izvo, iyo PineNote ine e-Ink skrini 227 DPI density, inoyevedza, uye resolution ye1404 × 1872. Iyo skrini yakakura, iine 10.3 ″ uye 3: 4 factor ratio. Inogona kuratidza kusvika pamatanho gumi nematanhatu egreyisi, girazi rinogadziriswa rakawedzerwa, uye Wacom brand electromagnetic resonance layer yakawedzerwa kune inoenderana nepeni yedhijitari. Uye ndirwo hwendefa iri zvakare bvumidza iwe kudhirowa neiyi Pen kunze kwekuverenga.
Kana zviri zvimwe zvemuchadenga, zvinosanganisira Rockchip RK3566 SoC, 1.8 Ghz ARM CPU, inosvika ku128 GB eMMC ndangariro yemukati, 4 GB ye RAM, 5 Ghz WiFi yekubatanidza, mamaikorofoni maviri akavakirwa uye masipika maviri, isina webcam, uye ne4000 mAh LiPo bhatiri rekuzvitonga kukuru. Kubhadhara kunoitwa kuburikidza nesokisi re USB-C.
PineNote ichashanda nekuda kwe Linux inoshanda sisitimu. Iwo mabheji ekutanga anoita kunge anotumirwa neManjaro, uchishandisa KDE Plasma sedesktop.
El dhizaini uye yekupedzisa zvinhu Iwo zvakare emhando yepamusoro, ane magnesium alloy furemu nemuviri, ipurasitiki inobata kumashure, uye iri 7mm gobvu, inova 1mm yakatetepa kupfuura iyo Kindle Oasis 3.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » PineNote: yakavhurwa sosi eReader nePen rutsigiro
Mubvunzo… Pane here chishandiso che linux chinonditendera kuti ndive nedhijitari notibhuku mune yakazara skrini (iyo inogona kushandisa wacom-mhando yedhijitari piritsi, nezvimwewo).